Football Khabar » घरेलु मैदानमा सिटीसँग रियल मड्रिडको नमिठो हार : रामोसलाई रातो कार्ड !
घरेलु मैदानमा सिटीसँग रियल मड्रिडको नमिठो हार : रामोसलाई रातो कार्ड !
अग्रता जोगाउन नसक्दा स्पेनिस क्लब रियल मड्रिडले युरोपियन च्याम्पियन्स लिग फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम १६ को पहिलो लेगको खेलमा इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटीसँग नमिठो हार भोगेको छ । नेपाली समयअनुसार बिहीबार बिहान आफ्नो घरमा भएको खेलमा रियल १–२ ले स्तब्ध बन्यो ।
रियलले खेलमा पहिला अग्रता लिए पनि त्यसपछि लगालग गोल खाएपछि घरेलु मैदानमा हार टार्न सकेन । रियलका कप्तान सर्जियो रामोस ८६औं मिनेटमा रातो कार्ड खाँदै मैदान छाडेका थिए ।
निकै रोमाञ्चक खेलको पहिलो हाफ भने गोलरहित बराबरीमा सकिएको थियो । तर, दोस्रो हाफमा दुवै तर्फबाट गरी ३ गोल भए । रियलले खेलको ६०औं मिनेटमा इस्कोको गोलबाट अग्रता लिएको थियो । भिनिसियस जुनियरले संघर्षपूर्ण ढंगले दिएको पासमा बक्समा तैनाथ इस्कोले कुनै गल्ती नगरी गोल गरेका थिए ।
तर, त्यसपछि खेल सिटीको पल्लामा गयो । खेलको ७८औं मिनेटमा ग्याब्रिएल जेससले सहजै गोल गर्दै खेल १–१ बनाए । त्यसको ५ मिनेटमै सिटीले पेनाल्टी पायो । रियलका डिफेन्डर ड्यानी कार्भाहालले सिटीका खेलाडी रहिम स्टर्लिङलाई बक्समा लडाएपछि पाएको पेनाल्टीमा केभिन डे ब्रुयानेले सहजै गोल गर्दै खेल १–२ बनाए । त्यसपछि रियल खेलमा फर्किन सकेन । र, खेल सिटीले जित्यो ।
खेलको ८६औं मिनेटमा रियलका कप्तन रामोसले रातो कार्ड खाएर मैदान छाडेका थिए । सिटीका खेलाडी जेसस एक्लै बल लिएर अघि बढेका बेला रामोसले पछिबाट गएर समातेर लडाएपछि रेफ्रीले उनलाई सोझै रातो कार्ड दिएर पठाएका थिए ।
यो हारसँगै रियलको अन्तिम आठको यात्रा कठिन बनेको छ । सिटीले २ अवे गोलसहित १–२ को जित निकाल्दा रियललाई कठिनाइ बढेको हो । अब अर्को महिना सिटीको घरमा हुने दोस्रो लेगमा रियलले नतिजा उल्टाउनुपर्ने हुन्छ भने सिटीलाई ०–१ को हार भए पनि अन्तिम आठमा जान काफी हुन्छ ।
प्रकाशित मिति १५ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०३:३५